डा. सञ्जय नागरल
सधैँ झैं म अस्पताल गएँ । पुगेको के थिएँ, केही फरकपनको अनुभूति भयो । प्रवेशद्वार नेर जिज्ञासु स्टाफहरु जम्मा भएका थिए । सानोतिनो भीड लागेको थियो त्यहाँ । सबैको हातमा मोबाइल थियो । सुरक्षागार्डहरु भीड हटाउनुको साटो आफैँ जिल्ल थिए ।
मैले रिसेप्सनलाई सोध्नै लागेको थिए, के भइरहेको हो ? ठीक त्यही बेला पोडियमा डाक्टर, व्यवस्थापन र अंगरक्षकसहित उनी देखिए । त्यहाँ एकप्रकारको हुलचाल जस्तो भयो । मानिसहरु फोटो लिँदैै थिए ।
सिनेमाका महानायक अमिभात बच्चन अस्पतालमा कोरोनाको विशेष जाँच गर्न आएका थिए । सम्पूर्ण अस्पताल नै बन्द भएझै त्यहाँ झुम्मिएको थियो ।
हाम्रो देशमा स्टारहरुको भिन्नै छवि र लोकप्रियता छ । मुम्बईका अस्पतालमा सिने स्टारहरु बारम्बार नआउने हैनन् । तर मानिसहरुलाई यो पत्याउन गाह्रो पर्छ कि सिने स्टारहरु पनि मान्छे हुन्, उनीहरु बिमारी पर्न सक्दछन् !
स्टारहरुको उपचारमा अस्पतालले केही फरक तरिका अपनाउनुपर्ने हुन्छ । सूचनाहरु गोप्य राख्न सकिन्न । मिडिया हरबखत वरिपरि हुन्छन् । स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा बारम्बार बुलेटिन दिइरहनु पर्दछ ।
बिमारी अवस्थालाई पनि कुनै सेलिब्रेसनजस्तो बनाउनु राम्रो हैन । यस्तो बेला मानिसलाई आफू र परिवारको गोप्यताभित्र रहन दिनु राम्रो हुन्छ । बिमारी पनि कुनै ब्रान्डिङ, मार्केटिङ, वा विज्ञापनजस्तो हुुनु दुःखद हो ।
सेलिब्रटीहरुको स्वास्थ्य सम्बन्धी गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाहरु पनि चुहिने समस्या विश्वव्यापी हो । अमेरिकामा यस्तो कामको लागि धेरै अस्पताललाई सरकारले दण्ड गरेको छ । बेलायतमा किट मेडिल्टानसँग सम्बन्धित दुःखद कथा छ । उनी लण्डनको किट एडबर्ड अस्पतालमा गर्भवती अवस्थामा भर्ना भएकी थिइन् ।
त्यहाँ काम गर्ने एक भारतीय नर्स जेकिन्था साल्दाहले किटको नर्सलाई अष्ट्रेलियन रेडियोसँग फोनमा कुरा गर्न दिएकी थिइन् । पछि यो बिषयमा यति ठूलो हंगामा भयो कि जेकिन्थाले आत्महत्या नै गरिन् ।
सुपरस्टारहरुले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पुर्‍याउन सक्ने सहयोग भनेको स्वास्थ्य सचेतना बढाउने र कोष निर्माणमा सहयोग गर्ने हो । क्रिस्टोफर रेभीले आफ्नो स्पाइनल कोर्ड इन्जुरीसम्बन्धि केसलाई कथा बनाएर सचेतना जगाएका थिए । यस रोगको उपचारलाई अनुसन्धानलाई सहज बनाउन कोष समेत जुटाएका थिए ।
जब स्टारहरु अस्पताल भर्ना हुन्छन्, पापाराजीहरुको भीड लाग्न थाल्छ । त्यसलाई सन्तुलनमा राख्न गाह्रो हुन्छ । बिमारीको परिवारका आफ्नै अपेक्षा हुन्छन् ।
अस्पतालका आफ्नै नियम हुुन्छन् । यो कुरा मिडियाले बुझ्नु राम्रो हुन्छ । सेलिब्रटीहरु अस्पताल आउँदा कहिले कहिँ अस्पतालको छवि एकाएक बढ्छ । कहिले ससाना गल्तीको लागि स्वास्थ्यकर्मीहरुले गाली खानुपर्ने अवस्था पनि आउँछ ।
सिनेमामा जस्तै अस्पताल भर्ना भएका अमिताभ बच्चनका भूमिकाहरु बिमार अवस्थामा पनि बिबिध बन्न पुग्दछन् । उनले मानिसलाई रोगसंग लड्न आत्मविश्वास बढाउने काम समेत गर्नुपर्ने हुन्छ । जब उनी कोभिड मुक्त भएर बाहिर आउने छन्, मानिसकोे आत्मविश्वास र रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता पक्कै बढ्ने छ ।
म आफूलाई अमिताभको फ्यान भन्न त्यति रुचाउन्नँ । मैले उनको पहिलो सिनेमा सात हिन्दुस्तानीदेखि पछिल्लो गुलाबो सिताबोसम्म हेरेको छु । मैले कामना गर्दछु कि कोभिडबाट मुक्ति पछि उनले कुनै उल्लेखनीय सिनेमाका लागि महत्वपूर्ण भूमिका गर्न सक्नेछन् ।
(डा.संजय नागरल अभिताभ बच्चनले उपचार गराई रहेको नैनाबती अस्पताल मुम्बईका सर्जन हुन् । यो छोटो आलेख उनले मुम्बई मिररमा व्यक्त गरेको भावनाको भावानुवादको संक्षेपीकृत रुप हो)
रुमल्लिएको नेकपा र अलपत्र पार्टी सदस्यहरु